IGAD oo soo dhaweeysay go’aannka RW iyo Maamullada | KEYDMEDIA ONLINE
IGAD oo soo dhaweeysay go’aannka RW iyo Maamullada
Urur Goboleedka IGAD, ayaa soo dhweeyay isku soo dhawaanshaha siyaasadeed ee soo if baxay saacadihii la soo dhaafay, waxayna ku taliyeen in dib loogu laabto miiska wada hadalka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Urur Goboleedka IGAD ayaa qoraal uu soo saaray kusoo dhaweeyay go’aanadii kasoo baxay Maamullada Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur Galbeed, isla markaana uu soo dhaweeyay Sii-hayaha Xilka Ra’iisuul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble.
Warka kasoo baxay IGAD, ayaa sidoo kale lagu baaqay in dhamaan dhinacyadu si deg deg ah u dhameystireen heshiskii 17 September 2020 lagu gaaray Muqdisho.
“IGAD waxay ugu baaqeysaa dhammaan daneeyayaasha inay si dhaqso leh ugu dhaqaaqaan dhameystirka heshiiskii 17-kii Sebtember iyada oo loo marayo wadahadal loo dhan yahay, hufan oo mudnaanta siinaya himilada shacabka Soomaaliyeed”, ayaa lagu yiri warka kasoo baxay IGAD.
“IGAD waxay si aad ah ugu boorineysaa dhamaan hoggaamiyaasha Soomaalida inay is xakameeyaan oo ay ka fogaadaan ficil kasta oo horseedi kara sii kordhinta rabshadaha. Dhammaan dhinacyada waa inay hubiyaan ilaalinta nafta, hantida iyo hay'adaha rayidka ah”. Ayaa sidoo kale lagu daray warka kaso baxay IGAD.
Sidoo IGAD, waxa ay Beesha Caalamka ka codsatay in gargaar bini’aadanimo lala gaaro barakacayaasha, ka dib rabshadihii dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho.